Raysal Wasaarihii Hore Ee Itoobiya Oo Booqasho Ku Tagay Eretria Iyo Ujeedada Safarkiisa | Berberatoday.com
Raysal Wasaarihii Hore Ee Itoobiya Oo Booqasho Ku Tagay Eretria Iyo Ujeedada Safarkiisa
Addis Ababa(Berberatoday.com)-Bil kadib markii Abiy Ahmed iyo Isaias Afwerki heshiis ay ku soo afjareen colaad u dhexeysay muddo 20 sano ah labadooda dal, Ra’isal wasaarihii hore ee Ethiopia Hailemariam Desalegn ayaa booqasho ku tagey magalada Asmara.
Mar la waydiiyey sida duulimaadyadaan u saameyn doonaan dhaqaalaha iyo dalxiiska labada dal ayuu sheegey Ra’isal wasaarihii hore ” Shirkada diyaaradaha Itoobiya oo ah mida ugu weyn qaarada Afrika duulimaadkeeda Asmara dhowaan lagu kordhin doonta magaalooyinka kale ee Eritrea.”
” Duulimaadyada Ethiopian airlines waxay hoos u dhigi doonaan qiimaha ticket- yada kuwasoo dhibaato ku hayey dadka reer Eritrea waxana ay bixin jireen Sadex jibaar marka la eego sida diyaaradaha la isugu xidho caalamka.” ayuu yidhi Hailemariam Desalegn oo la hadlaya wariye-yaal ka tirsan Shabait.
” Doorkee ayey qaadaneysaa shirkada diyaardaha Ethiopia, xiriirka dhulka ee dhinaca gadiidka sidee noqnayaa, sidee maalgaliyaasha Eritrea ku tagayaa Ethiopia iyo sidee jaaliyadaha dibada ee labada dal u maalgashanayaan wadamadaan ayaa waxay tahay wax u baahan in la qoraheeyo.” ayuu yidhi Hailemariam Desalegn
RW hore ee Ethiopia oo la waydiiyey kulankii uu la qaatey Madaxweynaha Eritrea ayaa yiri ” Waxaa uu ahaa kulankii ugu horeeyey aan la qaato Madaxweynaha. Mar baan ku arkey Qadar anigoo ah Wasiirka arimaha dibada iyo kaaliyaha Ra’isal wasaaraha. Maanta, markaan wada hadalnay muddo ku dhow Labo saacadood waxaan nahay labo nin isku mid ah. Hadaan fursadaan oo kale heli laheyn mar hore waxaa suurtagal ahaan laheyd in waxbadan aan wada qaban laheyn.”